Gingilchaawwan fayyadamtee deetaa hin barbaachifne gabatee DataPilot irraa haquu dandeessa.
Qabduu Gingilchi wardii keessaa qaaqa haalleen gingilchaatiif waamuuf cuqaasi. Karaa biraa, baafata haallee gabatee DataPilot waamiitii ajaja Gingilchi filadhu. Qaaqni Gingilchi ni mul'ata. Asittti gabatee DataPilot gingilchuu dandeessa.
Faayilii akka geessituu ammaatti saaguuf sanduuqa filannoo, faayiliitti kornyeessi akka hajjatuu taasiisi.
Galmee CommandCtrl+F6 wajjin filiitii Tab dhiibi
Itti dabaltees fuula Gargaarsaa keessatti cuqaasuu dandeessa achiin AjajaCtrl+F dhiibi.
Title is: Gabateewwan DataPilot gingilchuu